सहरका पोलमा तारको गुजुल्टोः कुरुप उस्तै, जोखिम उत्तिकै ! (भिडियोसहित) - Kendra Khabar
सहरका पोलमा तारको गुजुल्टोः कुरुप उस्तै, जोखिम उत्तिकै ! (भिडियोसहित)
२०७५, २७ कार्तिक मंगलवार ०५:३६
विजुलीका पोलहरुमा यसैगरी तारको गुजुल्टो बेरिएको दृश्य राजधानीबासीका लागि नौलो होइन । उफ्, हेरिराख्यो भने दिमाग नै जेलिएको महशुस तार । कति कुरुप देखिएको यो दृश्य ।
विजुलीको तार, इन्टरनेटको तार, टेलिफोनको तार, केवल टिभीको तार । तारै तार । यस्तोमा कुन लाइन के को हो ? कहाँको हो ? कसरी चिन्नु ?
पोलले थेग्न नसक्ने गरी तारको गुजुल्टो बनाइएको छ । कहिलेकाँही तारको भार थेग्न नसकेर पोल ढल्छ । अनि, हप्तौसम्म बनाईदैन । पैदलयात्रु, सवारीसाधन, आपपासका स्थानीयलाई सास्ती नै सास्ती । उत्तिकै जोखिम पनि ।
कतै रुखमा तार अल्झेको छ । कतै चुडेको तार भुँइमा लत्रिरहेको छ । करेन्ट लाग्छ कि भनेर डराउँदै हिँड्नुपर्ने वाध्यता छ ।
मुलुकमा समृद्धिको ठूलाठूला भाषणबाजी हुने गरेको छ । पर्यटनमार्फत समृद्धिको नारा भजाइएको छ । तर, सहरको यो कुरुप दृश्यले सरकारी नारालाई खिल्ली उडाइरहेको छ । अन्डरग्राउण्ड तार विच्छ्याउने प्रयास भएको भनेको पनि वर्षौ भयो । खानेपानीको पाइप विच्छाउन सडक भत्काएकै बेला बिजुलीलगायत इन्टरनेट, केवल, टेलिफोनको तार पनि अन्डरग्राउण्ड गरिदिएको भए के विग्रन्थ्यो ? राजधानीबासीले कहिलेसम्म यस्ता कुरुप दृश्य हेरिरहने ? कहिलेसम्म जोखिम मोलिरहने ?
यो बिजोग कहिलेसम्म ?
अव्यवस्थित तारका कारण सहर कुरुप मात्रै छैन, जोखिमपूर्ण छ । देख्दै पट्यारलाग्दा तारको गुजुल्टो र अस्तव्यस्त तारका कारण दुर्घटना बढेको तथ्यांक छ । कतै पोल ढल्छ, तार चुडिन्छ, तर समयमै मर्मत हुँदैन । जसकारण उपभोक्ता पनि मारमा परेका छन् ।
पछिल्लो समय सडक विस्तारका क्रममा धेरै ठाउँका तार काटिए । तर, मर्मत वा व्यवस्थापन भएन । निजी कम्पनीले टाँगेका तार झन् अस्तव्यस्त छ । उनीहरुले पनि ग्राहकलाई मार पर्नबाट जोगाएनन् । सडकसम्बन्धी सरकारी कार्यालयले प्राधिकरणलाई दोष दिन्छ, प्राधिकरणले सरकारलाई । यतिसम्म कि काठमाडौं महानगरपालिका समेत तार व्यवस्थापन आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नभएको भन्दै पन्छन खोज्छ ।
पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतिय तार जमिनमुनि विछ्याउने योजना अघि बढाएको छ । देशका मुख्य शहरका विद्युतको तारलाई भूमिगत तथा वितरण प्रणालीलाई स्वचालित गर्नका लागि प्राधिकरणले यस्तो योजना अघि सारेको हो । प्राधिकरणका अनुसार अबको २ वर्षभित्र काठमाडौँ उपत्यका भित्रको विद्युतीय तार जमिनमुनि विछ्याई सकिने छ ।
सुरुमा काठमाण्डौँ उपत्यकाका केबुल र टेलिफोनका तार जमिनमुनि विछ्याउने र अरु सहरमा पनि कार्यक्रम विस्तार गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । प्राधिकरणले काठमाण्डौँ उपत्यकामा विद्युतीय तार जमिनमुनि विछ्याउने कामको ठेकेदार छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जसका लागि आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान भएको छ । यो प्राधिकरणको सत्प्रयास हो ।
प्राधिकरणले विद्युतीय तार जमिनमुनि विच्छ्याउने काम सुरु गरे अरु निजी कम्पनी पनि विकल्प खोज्न वाध्य हुनेछन् । २०७४ साल असार २० गते संसद्को विकास समिति बैठकले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा रहेका विद्युतीय तारलाई अन्डरग्राउन्ड गराउनका लागि निर्देशन पनि दिएको थियो । समितिले विद्युतीय तारलाई युटिलिटी टनेलअन्तर्गत भूमिगत बनाउने काम गर्नका लागि उपत्यका विकास प्राधिकरण, सडक विभाग, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म पनि यो क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको थिएन ।
अब प्रक्रिया अघि बढेको छ । अव्यवस्थित तारको व्यवस्थापन भए सहर सुन्दर हुने थियो, सहरबासी सुरक्षित हुने थिए ।